Thomas Tuchel oo ka codsaday Chelsea inay lasoo saxiixato xiddig muhiim ka ah Real Madrid – Gool FM
(London) 19 Abriil 2021. Tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa doonaya xilli ciyaareedka soo socda inuu kooxdiisa ka xoojiyo dhanka daafaca dhexe, wuxuuna maamulka Blues ka codsaday inay la soo saxiixdaan daafaca Real Madrid ee Raphaël Varane.
Raphaël Varane ayaa qandaraaska uu kula jiro Real Madrid wuxuu dhacayaa xagaaga 2022, halka warar badan ay muujinayaan inuu doonayo inuu ka tago kooxda reer Spain inta lagu jiro suuqa xagaaga, inkastoo maamulka Los Blancos ay doonayaan inay qandaraaska u cusbooneysiiyaan.
Varane ayaa diirada u saaran kooxo dhowr ah, oo ay ka mid tahay Chelsea sida uu xaqiijiyay Christian Falk oo ah saxafi u shaqeeya wargeyska “Bild” ee dalka Germany, wuxuuna cadeeyay in Tuchel uu maamulka kooxda ka codsaday inay la saxiixdaan daafaca Los Blancos.
Tababaraha reer Germany aya doonaya inuu Raphaël Varane ku darsado qorshaha daafaca ee kooxdiisa xilli ciyaareedka soo socda qiimo kasta oo ay doonto ha ku qaadatee, maadaama milkiilayaasha kooxda reer London ay lacag ku bixinayaan saxiixa ciyaaryahanka, kaasoo jirsan doono 28 sano 25-ka April.
Inkastoo Real Madrid ay dooneyso inay qandaraaska u cusbooneysiiyo Raphaël Varane, haddana ma hor istaagi doonto bixitaankiisa haddii ciyaaryahanka uu doonayo, halka la filayo inay ku helaan iibkiisa adduun lacageed dhan 70 million euros.